Anyị na-enyere ụwa aka na-eto eto kemgbe 2012
Eletrọd graphite etinyere n'ime
Ụlọ ahịa mmepụta ihe
Nkwado oku + 86-13212161818
Nkwado email yidongcarbon@163.com
Ọnụ ahịa electrode graphite na-aga n'ihu na-arị elu.
Ma akụkụ ọkọnọ na akụkụ ọnụ ahịa dị mma, na ọnụahịa ahịa nke electrodes graphite na-aga n'ihu. Taa, a na-ebulila ọnụ ahịa electrodes graphite na China. Dị ka nke Nọvemba 8, 2021, nkezi ọnụahịa nke electrodes graphite bụ isi na China bụ 21,821 yuan/ton, mmụba...
Nyocha ahịa ahịa graphite electrode nke China na amụma amụma ahịa.
Nyocha ahịa graphite electrode Ahịa: N'ọgwụgwụ Julaị 2021, ahịa graphite electrode abanyela na ọwa dị ala, na ọnụahịa nke electrodes graphite ejirila nwayọ belata, yana mbelata nke ihe dịka 8.97%. tumadi n'ihi mmụba nke mkpokọta graphite ...
Ahịa graphite electrode kacha ọhụrụ (7.18)
Ọnụ ahịa ahịa elektrọd graphite nke China kwụsiri ike n'izu a. Aghọtara na n'ihi mbelata na nso nso a na ọnụ ahịa mmanụ ala sọlfọ coke na eziokwu na ụfọdụ igwe igwe igwe mgbada nke graphite electrodes nwere obere ebuka nke electrodes graphite, gbadata ...
Ọnụ ahịa coke agịga na-abawanye na Julaị, elektrọd graphite mgbada bilitere site na 20%.
site admin na 21-06-24
Ka ọnụ ahịa ígwè ígwè na-aga n'ihu na-arị elu, ọnụ ahịa ọkụ ọkụ na-agbawa nchara ga-anọgide na-arị elu, na uru nke ọkụ ọkụ eletrik na-eji ígwè na-emepụta ihe na-eji ígwè mpempe akwụkwọ na-egosipụta. Ihe dị mkpa taa: ọnụ ahịa UHP600 n'ahịa graphite electrode nke India ...
Na mberede: ọnụ ahịa electrode graphite nke India ga-abawanye site na 20% na nkeji nke atọ.
site admin na 21-06-17
Dị ka akụkọ ọhụrụ sitere na esenidụt si kwuo, ọnụahịa UHP600 na ahịa graphite electrode na India ga-ebili site na 290,000 rupees / ton (3,980 US dollar / ton) ruo 340,000 rupees / ton (4670 US dollar / ton). Oge igbu egbu sitere na Julaị ruo Septemba 21. N'otu aka ahụ, ọnụahịa HP4 ...
Ọnụ ego na-abawanye na uru ezughị oke, ọnụ ahịa electrode graphite ka na-atụ anya ka ọ ga-ebili.
site admin na 21-06-08
Nchịkọta ahịa: Ọnụ ahịa ahịa graphite electrode kwụsiri ike n'izu a. N'izu a, ọnụ ahịa petroleum sọlfọ dị ala, ihe ndị na-ebugo elu nke electrodes graphite, kwụsịrị ịda ma kwụsie ike. Mmetụta na-adịghị mma na elu akụrụngwa nke graphite electrodes ebelatawo, na t ...
Ahịa graphite electrode ga-anọgide na-arị elu.
site admin na 21-03-19
Ọ bụ ezie na ahịa graphite electrode anọwo na mgbago elu ọnwa isii, ụlọ ọrụ electrode graphite ugbu a ka nọ n'ọnọdụ nke na-agbaji n'ihi ihe na-arị elu nke akụrụngwa. N'oge a, nrụgide ọnụ ahịa nke graphite electrode ahịa bụ nke a ma ama, na ọnụahịa o ...
Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd bụ ọkachamara graphite electrode emeputa na mbupụ kemgbe 2012.
China graphite electrode ahịa a ...
Ọnụ ahịa coke agịga na-abawanye na Julaị, gbadata...
Na mberede: elektrọd graphite nke India...